ဒူးအစားထိုးကုသမှု မလုပ်ခင် ဆရာဝန်ကိုမေးသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းများ - Hello Sayarwon
ဒူးအစားထိုးကုသမှု မလုပ်ခင် ဆရာဝန်ကိုမေးသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းများ
Yun Sandi Nan Mon မှ ရေးသားသည်။ 03/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဒူးနာတယ်၊ အထိုင်အထလုပ်ရင် အရမ်းနာကျင်ရတယ်၊ လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး၊ စတဲ့ နာကျင်မှုတွေက အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူသင့်တဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။ ဒါတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြောင့် အရိုးအဆစ်တွေ ယိုယွင်းအားနည်းလာတာ၊ နာတာရှည် အဆစ်နာရောင်ရမ်းမှု၊ အရွတ်ထိခိုက်မှု၊ ဒဏ်ဖြစ်စေတဲ့ ထိခိုက်မှုကြောင့် ဒူးဆစ်ထိခိုက်မှု၊ အရိုးနုလွှာထိခိုက်မှု စတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒူးနာတဲ့အခါ ရောဂါအတိမ်အနက်ကို မူတည်ပြီး သောက်ဆေး၊ လိမ်းဆေးတွေနဲ့ကုသမှု၊ ထိုးဆေးကုသမှု၊ ဒူးအစားထိုးကုသမှုတို့လို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသရပါတယ်။ တကယ်လို့ တခြားနည်းတွေနဲ့ မသက်သာဘဲ ဒူးအစားထိုးကုသမှုကို စဉ်းစားနေရပြီဆို ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒူးအစားထိုးကုသမှု မခံယူခင် ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်ကို ဒီမေးခွန်းတွေ အရင်မေးပါ –
(၁) ဒူးအစားထိုးကုသမှု ဘယ်အမျိုးအစားက ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလဲ
အဆစ်နာဝေဒနာ ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာ၊ အသက်အရွယ်နဲ့ အထွေထွေကျန်းမာရေး အခြေအနေ တို့ကို မူတည်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုအမျိုးအစားကို ဆရာဝန်က ရွေးချယ်ပေးမှာပါ။ ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးက ဒူးဆစ်တစ်ခုလုံး အစားထိုးကုသမှုလား၊ ဒူးဆစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အစားထိုးကုသမှု လား ကြိုသိထားသင့်ပါတယ်။
(၂) နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလား
ဒီကုသမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေက အဖြစ်နည်းပါတယ်။ ကုထုံးတိုင်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ရှိတာပေါ့။ သွေးခဲပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာပိုးဝင်ခြင်း၊ ဒူးဆစ်နဲ့တဝိုက် တစ်ရှူးတွေထိခိုက်ခြင်း စတာတွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း လိုက်နာဂရုစိုက်မယ်ဆို အမြန်ဆုံးအကောင်းအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၃) ခွဲစိတ်မှုက ကြာမှာလား၊ ဆေးရုံတက်ရမှာလား
တချို့တွေမှာတော့ ဒူးအစားထိုးကုသမှုကို ပြင်ပလူနာအဖြစ်နဲ့ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲစိတ်မှုနောက်ပိုင်း ဒူးတစ်ဖက်တည်းအတွက် သုံးရက်ကနေ လေးရက် ဒါမှမဟုတ် ဒူးနှစ်ဖက်အတွက်ဆို ငါးရက်ကနေ ခုနစ်ရက်အထိ ဆေးရုံမှာနေရနိုင်ပါတယ်။
(၄) ခွဲစိတ်မှုက နာကျင်မှာလား၊ ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ
ခွဲစိတ်မှုနောက်ပိုင်း နာကျင်မှုကတော့ ကိုယ်ခံယူခဲ့တဲ့ ကုသမှုအမျိုးအစားကို မူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မပူပါနဲ့။ လိုအပ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့ အရောင်ကျဆေးတွေကို ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပေးမှာပါ။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်လေ ပျောက်ကင်းသက်သာမှု ပိုမြန်လေပါပဲ။
(၅) သောက်နေကျဆေးတွေကို ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင် ရပ်ဖို့လိုလား
ကိုယ့်မှာ တခြားရောဂါအခံ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် သောက်နေရတဲ့ဆေးဝါးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးတွေကို ခွဲစိတ်ချိန်နဲ့ နောက်ပိုင်း ဘယ်လိုသောက်သုံးရမလဲ သေချာမေးမြန်းပါ။
(၆) ပြန်ကောင်းဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
အများစုက ခွဲစိတ်ပြီး ၆ ပတ်အကြာမှာ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ လုံးဝအကောင်းအတိုင်း ပြန်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့က အချိန် ၃လအထိ ကြာနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ခွဲစိတ်မှု အမျိုးအစားကို မူတည်ပြီး ပြန်ကောင်းဖို့ ကြာချိန်အကြောင်း ဆရာဝန်ကို သေချာမေးမြန်းကြည့်ပါ။
(၇) ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်တွေ
ခွဲစိတ်မှုနောက်ပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ပြန်လည်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒူးသန်မာစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးကုထုံးတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ရှိမယ်၊ ဒါတွေက အနည်းငယ် နာကျင်ရနိုင်ပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြေနည်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ ရှောင်ရမယ်၊ နေထိုင်သင့်တယ်၊ ဘာတွေဂရုစိုက်ပေးရမလဲဆိုတာ ကြိုတင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ မခံယူခင်မှာ ဒီအချက်လေးတွေကို သေချာလေး မေးမြန်းဖို့ လိုပါမယ်။ အရိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေကို ခံယူဖို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အကောင်းဆုံးပေးနိုင်ပြီး အရိုးကုသမှုပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ King of Bones လို့ တင်စားခံရတဲ့ ထိုင်းအခြေစိုက် ဝေ့ဌာနီ ဆေးရုံလိုမျိုး ဆေးရုံတွေမှာ ကုသမှုခံယူလို့ရပါတယ်။
အရိုးကျန်းမာပြီး နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း……….
Accessed Feb-25, 2020.
လူသိနည်းနေသေးတဲ့ ဒူးအစားထိုး ခွဲစိတ်မှုနောက်ပိုင်းဆိုးကျိုး (၉) ခု